Izindaba - Usuku lonyaka omusha ngo-2021
Usuku lonyaka omusha ngo-2021
Esimweni esiwumshayabhuqe se-coronavirus pneumonia esakazeke umhlaba wonke, sizovalelisa ku-2020 bese siqala ngo-2021. Esimweni sokushiya abadala bemukele okusha, egameni labaholi beqembu le-Chenguang bio, ngithanda ukunweba okusha imikhonzo yonyaka nezifiso eziqotho kubo bonke abasebenzi nemindeni yabo abadonsa kanzima phesheya nasemakhaya, nakubaholi kuwo wonke amazinga, bonke abaninimasheya, amakhasimende, ophathina nabangane abavela kuzo zonke izizinda zokuphila abanakekela futhi basekele ukuthuthukiswa komlando weChenguang.
Iminyaka engamashumi amabili yokusebenza kanzima, iminyaka engamashumi amabili yezithelo zasentwasahlobo nasekwindla. Eminyakeni engama-20 edlule, besilokhu sinamathela emgomweni wokulunga okukhulu, sisebenza kanzima futhi sizinikele, futhi asenzanga mizamo emincane njenganoma ngubani omunye umuntu. I-Chenguang bio isungule kusuka ebhizinisini lohlobo lokusebenzela ukuba yinkampani yamazwe amaningi efakwe ohlwini enezinsizakalo ezingaphezu kwezingama-30. Kusukela kumkhiqizo owodwa wokuqala we-capsanthin, i-Chenguang bio manje inezichungechunge eziyisithupha, izinhlobo ezingaphezu kwezingu-100 nemikhiqizo emithathu yokuqala yomhlaba Kuyibhizinisi eliholayo embonini yokukhipha izitshalo. Ukusuka enganeni encane ukuzola ukuzethemba, kusuka esitsheni esibuthakathaka kuya ekukhulelweni kube yisihlahla esikhulu, lena yinganekwane yomkhakha ebhalwe yibo bonke abantu bakwaChenguang ngomzabalazo kanye nobuchule!
Ngo-2020, ubhubhane lwenoveli i-coronavirus pneumonia lushaye ngamandla, futhi umnotho womhlaba ulahlekelwe kakhulu. Ekuqaleni kwalo bhubhane, isimo sokunqanda nokulawula ubhubhane lwasekhaya sasinzima, futhi izinto zokwelapha zazishoda. Le nkampani ithenge utshwala, izifihla-buso, okokuvikela okuvikelekile nezinye izinto ngezinsizakusebenza zasekhaya nakwamanye amazwe okokuqala ngqa, yasebenza isikhathi esengeziwe ukwenza amaphilisi athambile e-lycopene, futhi yanikela emgqeni ongaphambili wobhubhane olulwa nalo. Ngokusabalala okusheshayo kobhadane lwangaphandle, inkampani inikele ngamaski ngesikhathi esifanele, ama-capsule athambile e-lycopene nezinye izinto kumakhasimende angaphandle. Ngesikhathi sobhadane, kunikelwe utshwala obubiza ngaphezulu kwama-yuan million, izifihla busiki, okokugqoka okuvikelayo, ama-capsule athambile e-lycopene nezinye izinto zokulwa nobhubhane kwanikelwa emphakathini, kwaba nomthelela ekulweni nalolu bhubhane. Ngakolunye uhlangothi, ngokuya ngesimo sokunqanda nokulawula ubhadane, inkampani yatshala ngokucophelela ukuqala kabusha komsebenzi nokukhiqiza ukuqinisekisa ukusebenza okuzinzile kokukhiqiza nokusebenza, ikakhulukazi abasebenzi abahlelelwe ukwenza ukutshala kwe-marigold eXinjiang ngokushesha okukhulu ngemuva uMkhosi Wentwasahlobo, ukuze kuqinisekiswe ukuthi umsebenzi wesizini awuthinteki. Ngonyaka odlule, bonke abasebenzi benze imizamo emikhulu yokunciphisa imiphumela emibi yalolu bhubhane, ukuqinisekisa ukusebenza kwenkampani okuzinzile kanye nokukhula kokusebenza kwamabhizinisi uma kuqhathaniswa nalokhu. Imali yokuthengisa kanye nenzuzo yenkampani ifinyelele phezulu, futhi inzuzo yayo yokuthekelisa idlule izigidi eziyi-140 zamadola aseMelika. Inani lazo lemakethe lenyuke lisuka ezigidigidini ezingama-3.8 ekuqaleni konyaka laya ezigidigidini eziyi-9 okwamanje.
Ku-2020, inkampani inamathela kumqondo wokugxila kwamakhasimende, yenza ukuhlunga okujulile kwezinzuzo, futhi ithuthukise inzuzo ephelele yokuncintisana yemikhiqizo. Umthamo wokuthengisa we-capsanthin ufinyelele ezingeni elisha; ivolumu yokuthengisa yemikhiqizo ye-lutein iqhubekile nokukhula, futhi ngemodi yangaphambi kokuthengisa, ibambe iqhaza elibalulekile ekuqiniseni ukwehla kwentengo nokugcina intuthuko enempilo embonini; izinto zokusetshenziswa zamaprotheni zincike esikweletini ukubona ukusebenza kokukhiya ngenkathi uthenga futhi uthengisa, uvikela izingozi; ukuthengiswa kokudla kwezempilo kuzuze intuthuko entsha, i-OEM nebhizinisi lokuthekelisa seluqalile, futhi ukubambisana kwangaphandle sekuyisu elisha lokumaketha Umkhuba wokuthuthuka wemikhiqizo yokudla kanye nokwelapha muhle, futhi ukuthengiswa kwe-curcumin, ukukhishwa kwembewu yamagilebhisi neminye imikhiqizo kuzuze kakhulu ukukhula. Ngasikhathi sinye, inkampani ikhuthaza ngenkuthalo ukwakhiwa kwesisekelo sezinto eziluhlaza. EXinjiang naseYunnan Tengchong, indawo yokutshala i-marigold ingaphezu kuka-200000 mu; indawo yokutshala ye-stevia ezungeze isifunda saseQuzhou ingaphezu kwama-20000 mu; Ipulazi le-sinazonggui lenkampani yezolimo yaseZambia seliphothule ama-5500 mu wokutshalwa kwepelepele, ipulazi i-qishengsheng seliqede cishe ama-15000 mu wokuthuthukiswa komhlaba, futhi lenze umsebenzi wokutshala isivivinyo se-marigold nopelepele.
Ku-2020, inkampani inamathela kuguquko lobuchwepheshe bokukhiqiza futhi iyaqhubeka nokwenza ngcono inzuzo yayo yokuncintisana. Ukuthuthukiswa kwenqubo yokukhiqiza kwe-silymarin kwaqedwa ngempumelelo, isivuno se-silymarin sakhuphuka sisuka kuma-85% saya kuma-91%, futhi izindleko zokukhiqiza zehliswa kakhulu; ukunwetshwa komthamo wokukhiqizwa kwamaprotheni kwaqedwa eKashgar Chenguang, futhi umthamo wokucubungula wansuku zonke wembewu elula wakhuphuka usuka kumathani angama-400 waya kumathani ayi-600; ukuthuthukiswa kwenqubo yokukhiqiza kwe-stevioside kuqaphele ukuguqulwa kokukhiqizwa kwemikhiqizo ye-CQA; ukuguqulwa kwemikhiqizo ye-QG ekhishwe ekudleni kwe-Tagetes erecta kwaqedwa, futhi umugqa owodwa wokusebenza nsuku zonke wokudla kwe-chrysanthemum wafinyelela kumathani ayi-10 amathani ayi-0.
Ku-2020, ukwakhiwa kwamaphrojekthi amasha enkampani kuzothuthukiswa ngokushesha ukuthola amandla okuthuthuka kwenkampani esikhathini esizayo. I-biomass steam boiler isetshenzisiwe, futhi izindleko ze-steam zinciphile; imigqa emithathu yokukhishwa kweYanqi Chenguang ihlanganisiwe, futhi umthamo wokucubungula nsuku zonke wezinhlayiya zikapelepele ungamathani ayi-1100. Ngasikhathi sinye, ukwakhiwa kokucwengwa nokuxuba umugqa womkhiqizo sekuphothuliwe, futhi ukukhiqizwa okuhlanganisiwe kokukhishwa, ukucwengwa nokuhlanganiswa okuqondile kwemikhiqizo yopelepele eXinjiang sekuzuziwe. Inkampani yaseTengchong Yunma ithole ilayisense yokucubungula i-hemp ngezimali ezimbalwa, yaqaphela ukukhishwa kobuchwepheshe obuphambili futhi yakha ukuthengiswa komkhiqizo, futhi yenza isinyathelo esiqinile ekuhlelweni kwamasu wemboni yezimboni yenkampani. Ukwakhiwa “kwezikhungo ezintathu” zenkampani i-Handan Chenguang kwenziwe inqubekela phambili, isikhungo se-R & D nesikhungo sokuhlola savulwa ngokusemthethweni, kwahlalwa izakhiwo eziyi-8 zokuhlala, izakhiwo ezingama-7 zokuhlala kanye nezakhiwo ezingu-9 zokuhlala Kwaqedwa ukwakhiwa; izibopho eziguqulwayo zakhishwa ngokushelela, zikhulisa ama-yuan ayizigidi ezingama-630; ulayini omusha wokukhiqiza kawoyela ongajwayelekile, iphrojekthi yeHetian Chenguang nephrojekthi yeYecheng chengchenlong zaqala ukusebenza; ukwakhiwa kwephrojekthi yeTumushuke Chenguang ne-API kwenziwe ngendlela ehlelekile.
Ngo-2020, inkampani ithobela umnyombo we-R & D ukukhonza ukukhiqiza nokusebenza, ngokuqhubekayo ikhuthaza ukuthuthukiswa kwenqubo yomkhiqizo, futhi ithuthukisa ngokuqhubekayo imikhiqizo emisha nokusetshenziswa. Ngokucwaninga nokwenziwa ngcono kwenqubo yokususa usawoti we-pepper oleoresin kanye nenqubo yokwelashwa kwe-colloidal pigment, isicelo sokukhiqiza sagcwaliseka, inkinga yokusungula yaxazululwa, futhi ukuthengiswa kwemakethe kwaqiniswa; ukuguqulwa kokukhiqizwa kwephrojekthi ye-lycopene oleoresin saponification ne-crystallization iphothuliwe, futhi umkhiqizo womkhiqizo wathuthukiswa kakhulu; ukuguqulwa kwezimboni kokukhishwa kwe-rosemary, i-silymarin kanye neminye imiklamo emisha yomkhiqizo kwaqedwa, futhi ukuthengisa okukhulu kwenziwa; I-QG, i-CQA, i-Wanli, njll Ukuqondiswa kwesicelo se-Shouju fermentation extract, i-garlic polysaccharide neminye imikhiqizo emisha inqunywe ngokuyisisekelo; ubuchwepheshe bokutholwa kwe-infrared online nokungaxhunyiwe ku-inthanethi buzuze impumelelo entsha, futhi ukwakhiwa kwesikhulumi sokusebenza kahle sekuthuthukile, okubeke isisekelo esiqinile sokuthuthuka kwenkampani isikhathi eside esikhathini esizayo. Le nkampani inikezwe umklomelo wesithathu “owenziwe eChina · umpetha ongabonakali” kanye no “Oscar” wemiklomelo yezimboni yaseChina.
Ngo-2020, inkampani izoqasha odokotela namakhosi angaphezu kwama-60 ukuze bafake igazi elisha ebhizinisini; ukuhlolwa okuzimele kwamatayitela obuchwepheshe kuchaza indlela yokuphathwa kwamaphoyinti, futhi inani lonjiniyela abaphezulu lizokhuphukela ku-23; izoqhubeka nokujulisa imodi yokuqeqeshwa kwamathalente “yokubambisana kwamabhizinisi ezikole, ukuhlanganiswa kwemfundo yezimboni”, futhi ngokuhlanganyela kuqeqeshwe odokotela namakhosi abayi-6. Abasebenzi abathathu benkampani bakhethwe “njengamakhono amancanyana asezingeni eliphakeme e-Handan City” kanye no “three three three three Talents Project” esifundazweni sase-Hebei; U-Yuan Xinying uzuze isihloko "semodeli yezabasebenzi kazwelonke" futhi waba ngomunye umfuziselo wezabasebenzi kuzwelonke eQuzhou ngemuva kweminyaka engaphezu kwengu-30, ekhombisa ngempela "intuthuko evamile yabantu namabhizinisi".
Ku-2020, inkampani izoqhubeka nokwenza ngcono uhlelo lokuphatha futhi ithuthukise izinga lokuphathwa okuhle. Siyaqhubeka nokukhuthaza ukulinganiswa, sikwenze, futhi sithuthukise ukusebenza kahle kwezinga namazinga omsebenzi. Qhubeka ngokugqugquzela izinhlelo eziyisikhombisa zokuphathwa kokukhiqizwa, futhi ubeke isisekelo sokuphatha sokwakhiwa kweworkshop yedijithali. Umnyango wezokuphatha uphinde uthuthukise uhlelo lokuphathwa oludlulela ezinkampanini futhi uqinise ukuphathwa nokulawulwa kwezinkampani ezingaphansi. Ngaso sonke isikhathi yenza ngcono imodi yokuhlola kanye nesikhuthazo, futhi udlale kangcono ukuhola nendima yokukhuthaza yohlelo lokukhuthaza kanye nesikhuthazo.
Ngemuva kweminyaka engama-20 yokusebenza kanzima, inkampani isiqongelele amakhono, ubuchwepheshe, inhlokodolobha, ipulatifomu, isiko nezinye izinsiza. Ngokuzayo, sizoqhubeka nokudlala ngokugcwele ezinzuzweni zobuchwepheshe bokukhipha izitshalo, imishini yokukhiqiza, i-R & D ephezulu kanye nokulawulwa kwekhwalithi, ukuhlanganisa izinsiza ezinenzuzo emhlabeni, ukusheshisa inqubekelaphambili yokwakhiwa kwesisekelo sezinto ezingavuthiwe eZambia, qhubeka nokwakha ipulatifomu yemvelo yokukhipha kanye neyempilo yebhayoloji, futhi sikhuthaze ngokuqinile imboni yezempilo enkulu ihlinzeka umphakathi ngokudla okunempilo futhi okungabizi kakhulu.
Ngo-2021, kufanele senze umsebenzi oqinile wokuhlunga izinzuzo zemikhiqizo yethu, siqhubeke nokwakha izinzuzo eziphelele zokuncintisana ngemikhiqizo yethu, futhi siqhubeke nokwandisa isabelo semakethe se-capsicum, i-capsicum oleoresin, nemikhiqizo ye-lutein; dala inzuzo eyodwa yomkhiqizo wokuncintisana ngemikhiqizo yokudla okunomsoco nokwelapha, i-stevioside, nemikhiqizo yezinongo, futhi ulwele ukuba ngumholi eChina; thatha izinyathelo eziningi ukukhuthaza ukuthuthukiswa kokukhishwa kwe-Ginkgo biloba, i-rosemary extract, i-silymarin, nemikhiqizo yezimboni Ukuthengiswa kwemakethe ye-hemp neminye imikhiqizo kuzosheshisa ukutshalwa kwezindawo ezintsha zokukhula komnotho wenkampani, kanye nokwabiwa kokudla kwezempilo nemithi yendabuko yamaShayina zizoqhubeka nokwenza ngcono ukuncintisana kwazo futhi zilwele izinzuzo ezinkulu.
Ngo-2021, kufanele sihambisane nomqondo “wamathalente, impumelelo kanye nezinzuzo”, ngokuqhubekayo sithuthukise indlela yokuphatha yocwaningo lwesayensi, futhi sisheshise ukuguqulwa kwempumelelo yesayensi nezobuchwepheshe. Bambelela ekusetshenzisweni okuphelele kwezinsizakusebenza, qhubeka nokukhuthaza ukuthuthukiswa kanye nocwaningo lwemikhiqizo elwa nezidakamizwa, ukusheshisa ukwakhiwa komkhiqizo ozimele wokudla wezempilo, nokusheshisa ukuthuthukiswa komkhakha wezempilo wezinto eziphilayo. Ngokusekelwa "izikhungo ezintathu", lwela ukwakha ipulatifomu yocwaningo lwesayensi "ehola umhlaba wonke". Kufanele silwele ukuqoqa amakhono okuqala abanzi, ochwepheshe nabahola phambili embonini ekhaya nakwamanye amazwe, siqhubeke sithuthukisa uhlelo lokuqeqeshwa kwabasebenzi, sinikeze ukudlala okuphelele kubuciko babasebenzi, futhi silwele ukwakha ithimba lochwepheshe bemboni ephezulu ofuna ukusebenza, angasebenza futhi angaxhasa ukuthuthukiswa okusheshayo kwenkampani.
Ngo-2021, sizoqhubeka nokukhuthaza ukwakhiwa kokuhlelwa kwamazinga okuphathwa, inqubo kanye nakho, futhi siqhubeke nokwenza ngcono izinga lokuphathwa okuhle. Ukuqhubeka nokuqinisa nokwenza ngcono uhlelo lokuphathwa kokuphepha kokukhiqiza, ukuqinisa ukuqwashiswa komugqa obomvu ngomkhiqizo wezokuphepha, ukuqinisekisa ukukhiqizwa kokuphepha; yenza umsebenzi oqinile ekuphathweni kwezinhlelo eziyisikhombisa zokukhiqiza, uhlele ngenkuthalo ukwakhiwa kwe-model model yedijithali, uqhubeke nokwenza izinzuzo zokukhiqiza, uthuthukise ukuncintisana okuphelele kwemikhiqizo; ukugqugquzela ngenkuthalo ukwakhiwa kabusha kwepuleti lekotini, futhi kukhuthazwe ukuthuthukiswa okusheshayo nokungcono kwebhizinisi lamapuleti ekotini.
Ngo-2021, sizoqhubeka nokugcina umqondo oyinhloko wamasiko "wokuthuthukiswa okuvamile kwabantu namabhizinisi", siqhubekele phambili nenkambiso yenkampani yokuhlanzeka nokuthembeka, ukukhuthala nokuzinikela, ukuthembeka nokuthembeka, ukuthembeka nokuzikhuza, ukuhambisana nomgomo wokulwela abantu, futhi unikeze ngeqonga lokuqala lomsebenzi wokuzenzela iningi labasebenzi ukuthi lifeze amaphupho abo kanye namagugu abo.
Onyakeni omusha, kufanele silandele umhlahlandlela wezinto ezintsha kanye nomzabalazo onzima, ngomoya wokubamba usuku nokubekezela, igxathu negxathu, kuye enhlosweni enkulu yokwakha isizinda somkhakha wemvelo wezimboni zomhlaba, okwenza imboni yezempilo yemvelo ibe nkulu futhi okunamandla, nokwenza iminikelo empilweni yabantu, qhubekela phambili ngesibindi, futhi ngokuhlanganyela uqambe ikusasa eliqhakazile le-biology yeChenguang!
Ekugcineni, ngikufisela usuku oluhle lonyaka omusha, umsebenzi obushelelezi, injabulo yomndeni nakho konke okuhle!